Yangon Land Confiscations for Public Projects Must Comply with Law
Myanmar’s Foreign Trade Hits $6.1 Billion in Two Months
Tin Mg Oo/Myanmar Business Today Car rental service Yoma Car Share has expanded to 25 rental hubs across Myanmar with the recent opening of the People’s Park rental hub on Yangon’s U Wisara Road. “We are creating opportunities for customers to effortlessly have access to various types of vehicles to suit...
Global gold price eased, but the local prices show no reflection
The local gold market saw onlyaslight price fluctuation without reflecting the global gold market where the gold price dropped. The global gold price was at $1,906 per ounce on October 24 and dropped to $1,881 on October 29. However, the local gold price stood at K1.3115 million per kyattha...
When it comes to associations, there are many different phases. It doesn't necessarily indicate getting married, nonetheless it isathe perfect time to embrace the partner's blemishes and job to defeat them. Once you have reached this stage, you could have learned to love each other and...
ပြည်ပသို့ ဆန်တင်ပို့ခွင့်လိုင်စင်အား လက်လွှဲမရောင်းချရန် ညွှန်ကြား
ပြည်ပသို့ ဆန်တင်ပို့မည် ဆန်ကုန်သည်များသည် အမှန်တကယ်တင်ပို့နိုင်မည့် ဆန်ပမာဏကိုသာ လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်နှင့် တင်ပို့ခွင့်လိုင်စင်အား အခြားကုန်သည်အား လွှဲပြောင်းရောင်းချခြင်းနှင့် ဝယ်ယူခြင်းမပြုကြရန် မြန်မာနိုင်ငံဆန်စပါးအသင်းချုပ်က ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။ ဆန်စပါးစျေးကွက်တွင် ပြည်တွင်းစားသုံးမှုဖူလုံမှုအပြည့်အဝရှိကာ လိုအပ်ချက်ရှိပါက ရိက္ခာဖြန့်ဖြူးရန်အတွက် အရန်ဆန်ထားရှိနိုင်ခြင်းကြောင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ်မေလတွင် ဆန်တန်ချိန် တစ်သိန်းခွဲကို ပြည်ပသို့ တင်ပို့မည်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ တင်ပို့ရန် ကုမ္ပဏီ ၁၀၃ ခုအား ရွေးချယ်ထားပြီး အဆိုပါစာရင်းတွင် မပါဝင်သည့်ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ပြည်ပသို့ တင်ပို့လိုပါက တန်ချိန် ၁၂၅ တန်အထိ တင်ပို့ခွင့်လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံဆန်စပါးအသင်းချုပ်က သိရသည်။ ထိုပြင် အရန်ဆန် ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းအတွက် သတ်မှတ်စျေးဖြစ်သည့် ၂၁၆၀၀ ကျပ်ကို စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာနသို့ ပေးသွင်းပြီးမှသာ ပို့ကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားခွင့်ရမည်ဖြစ်သည်။ ပြည်ပသို့ဆန်တင်ပို့သည့် ကုန်သည်မဟုတ်ဘဲ အရန်ဆန်ရောင်းချလိုသော စက်ပိုင်၊ကုန်သည်များသည်လည်း...
အောက်တွင် မြန်မာလို ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည် Dollar Rate against Myanmar Kyat, which has been weak since earlier this year, bounced back to nearly K1,400 per dollar today. On July 17, greenback against Myanmar Kyat was around K1,376 per dollar on buying price and K1,383 per dollar on selling price compared to K1,385 in buying...